ဘာများအကူအညီပေးရမလဲ? တယ်လီနောမြန်မာမှ သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ သင်မေးလိုသမျှ မေးခွန်းတိုင်းအတွက် တယ်လီနောရဲ့ call center နံပါတ်များအား နံနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၁ အတွင်း ခေါ်ဆို မေးမြန်း နိုင်သလို အမေးများသော မေးခွန်းများကဏ္ဍ တွင်လည်း ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ တရားဝင် Facebook Page သို့လည်း message ပို့ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားရေးဌာန
တယ်လီနော Partners များအတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားရေးဌာန
တယ်လီနော partners များအနေဖြင့်ထပ်မံ လိုအပ်သော အထောက်အပံ့များအတွက် တယ်လီနောသုံးစွဲသူ ဆိုင်ရာ ပြန်ကြားရေးဌာနသို့ နံနက် ၆နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပါ တ် ၅၅၅ (သို့မဟုတ်) ၇၇၇ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Digital မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ခြင်း ရဲ့ အားသာမှုကို တယ်လီနောမှ ယုံကြည်ပါတယ်။ တယ်လီနောရဲ့ တရားဝင် Facebook page မှတစ်ဆင့် သင်သိလိုသမျှမေးခွန်းများကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနောရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတစ်ခုခုများဖြစ်နေမလား ? တယ်လီနောရဲ့ တရားဝင် Youtube Channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မယ် ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ video တွေ၊ တယ်လီနောရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ smart tips တွေနဲ့ အခြားနောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် အမည်ပေါက်စစ်ဆေးခြင်း
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တယ်လီနောအကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ တယ်လီနောမှ အစီအစဉ်သစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန် တို့အတွက် ယခု application မှတစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။